Sandblasting Media Market habe dia tokony hahatratra 441,9 tapitrisa USD ny 2023 - China Shanghai Bosun Marokoroko
Sandblasting Media Market habe dia tokony hahatratra 441,9 tapitrisa USD tamin'ny 2023
Sandblasting Media Market habe mialoha mitombo amin'ny 6.5% CAGR avy amin'ny 2016 ny 2023. Global sandblasting haben'ny tsena haino aman-jery, amin'ny boky teny, dia nametraka mitombo amin'ny fotsiny eo ambany 6% CAGR. US sandblasting haben'ny tsena haino aman-jery dia ny mihoatra USD 96 tapitrisa tamin'ny 2023.
alalan'ny milina azo baikoina fanapoahana rafitra ireo hatrany nolaniana mba hanatsarana ny haino aman-jery sandblasting tafiditra ny haben'ny tsena amin'ny toerana fanaraha-maso ny kalitaon'ny zavatra ilaina dia tsy laniny ny modely vahaolana automatique. Industries anisan'izany ny aerospace, fiara, ara-pitsaboana sy ny fitaovana elektronika mpanjifa mampiasa ity fitaovana maro ao anatin'izany ny fampiharana ara-nofo fanesorana, adin-tsaina fanampiana, bobongolo ny fanadiovana, ambonin'ny fiomanana, coating fanesorana sy nitifitra peening.
Endri-javatra tsy voatery nanolotra toy ny servo maso Rotary positioner, mandeha ho azy fanaraha-maso ny haino aman-jery mikoriana, mandeha ho azy ny tsindry fipoahana fanaraha-maso, Rotary lefona ny fahaizany, ny fanangonana antontan'isa fanao, tatitra taranaka, mandeha ho azy tafarina dia mety hitondra tinady. US sandblasting haino aman-jery dia forecast tsena habe mihoatra USD 96 tapitrisa tamin'ny 2023.
Sandblasting haino aman-jery ny fampiharana tsena dia ahitana ny fampiasana ny abrasives ny hanapaka, roughen, malama, na poloney faritra madio, na ny fitaovana manala ny hanova na ny etỳ ambonin'ny lafiny endrika. Ankoatra izany, ireo Marokoroko sy poti koa ampiasaina amin'ny mifono ary nampikambana teny maro ao anatin'izany ny fampiharana Nikosokosoka, fanapahana, ambonin'ny famaranana, sy fikitroha. Indostria toy ny fanorenana, fiara, aerospace sy ny orinasa, dia ny lehibe-fampiasana farany faritra.
Key fomba fijery avy amin'ny tatitra dia ahitana:
Marokoroko sy fanapoahana aluminium azôty tsena isaina ho an'ny mihoatra ny 10% ny orinasa mandray anjara amin'ny 2015 ary forecast hitombo amin'ny 7.2% CAGR avy amin'ny 2016 ny 2023. Izany dia nisafidy ho an'ny fampiharana manokana izay ambonin'ny manokana takiana farany izay manamarina ny vola fanampiny.
Vy voatifitra sy ny herimpo dia antenaina mba hahazo anjara avy amin'ny orinasa lehibe 2016 ny 2023 tokony hanaovan-tsoa amin'ny fampiasana be dia be ao amin'ny fipoahana manadio sehatry ny fanesorana ny sehatra fikosoham-bary, ary nandoko sy harafesina amin'ny vy faritra.
Silica sandblasting haino aman-jery eran-tsena anjara Nanjakazaka tamin'ny namany fanjifàna tamin'ny 2015. Ity fangatahana Avy voalohany indrindra avy any Azia Pasifika, izay mahita ny fitaovana ampiasaina midadasika noho ny tsy fisian'ny lalàna mitovy amin'ireo hita ao amin'ny firenena Eoropeana manan-danja, ary koa ny fotoana vidiny ambany raha oharina amin'ny fitaovana hafa.
Asia Pacific sandblasting tsena anjara haino aman-jery, no mpifehy 45% tamin'ny 2015. Miavaka maharitra sehatry sy mitombo fananana fotodrafitrasa fandaniana dia tsara ho an'ny faritra.
Post fotoana: Aug-15-2016